Rotterdam Hague kuenda kuMilan Bergamo nendege paTransavia izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Rotterdam Hague kuenda kuMilan Bergamo nendege paTransavia izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Italy Kuputsa Nhau • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vols kubva kuRotterdam Hague kuenda kuMilan Bergamo paTransavia izvozvi
Kuvhura katatu kana kana kanokwana vhiki nevhiki kuguta rechipiri rakakura muNetherlands rinotevera zhizha, mutakuri ane mutengo wakaderera wechiDutch anowedzera zvakanyanya mepu yemugwagwa weMilan Bergamo kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweEurope.
Transavia inotanga kubatana neRotterdam Hague Airport kubva kuMilan Bergamo Airport.
Rotterdam inzvimbo huru yekugadzirisa zvinhu uye yezvehupfumi uye kuwedzera kwakakosha kunetiweki yaMilan Bergamo.
Kune mumwe mutsva wendege kuti azive kugona kwemusika chiratidzo chakakosha chekwaniso yeLombardy nekuwedzera kudiwa.
Milan Bergamo Airport yazivisa kutanga kwekubatanidza kweTransavia kuRotterdam The Hague, zvichiratidza kuwedzerwa kwendege nyowani yechitatu pasuwo reLombardy mumwedzi ichangopfuura. Kuvhura katatu kana kana kanomwe vhiki nevhiki kusevhisi kuguta rechipiri pakukura muNetherlands rinotevera zhizha, mutakuri ane mutengo wakaderera wechiDutch anowedzera zvakanyanya Milan Bergamomepu yemugwagwa kuchamhembe-kumadokero kweEurope.
Giacomo Cattaneo, Director weCommercial Aviation, SACBO inoti: "Imba kuchiteshi chengarava chikuru muEurope, Rotterdam inzvimbo huru yekutakura zvinhu uye yezvehupfumi uye kuwedzera kwakakosha kunetiweki yedu. Kuti mushandi mutsva wendege azive mikana yemusika chiratidzo chakakosha chekukwanisa kweLombardy uye kudiwa kuri kuwedzera. "
Kubatana nebasa rakasimbiswa raMilan Bergamo kuEindhoven, kuvhurwa kweTransavia chinongedzo kuRotterdam kuchapa mutakuri weboka weAir France-KLM chikamu che30% yenhandare yenhandare yeDutch. Ikozvino ichipa dzinosvika mazana matatu nendege dzinoenda kuNetherlands zhizha rinotevera, dunhu reLombardy richava nehukama hwakakosha kuEuropean hupfumi hukuru hwechinomwe neGDP.
Marcel de Nooijer, Transavia CEO, inoti: “Tine chivimbo tichitarisira kuzhizha ra2022 uye tinofara nekuwedzera kwehukama hwedu hutsva neMilan Bergamo. Izvi zvinoita kuti tikwanise kuramba tichipindura kune zvishuwo zvevatakuri vedu vanoda kutsvaga zvitsva. Mwaka uno wezhizha takaona kuti maDutch vane shungu dzekufamba zvakare, semuenzaniso pazororo kana kushanyira mhuri. Isu tinoona kuti mabhenji echando chino ari kutora uye isu zvakare tine tarisiro dzakakwirira dzechando. Tinotarisira kuenderera nesimba iri kusvika muzhizha ra2022. ”
Rotterdam Hague Airport (yaimbova Rotterdam Airport, Vliegveld Zestienhoven muDutch), inzvimbo diki yendege inoshandira Rotterdam, guta rechipiri pakukura muNetherlands neThe Hague, guta rayo rekutonga nehumambo. Iyo iri 3 NM (5.6 km; 3.5 mi) kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweRotterdam muSouth Holland uye ndiyo yechitatu yakabatikana nendege muNetherlands.
Orio al Serio International Airport, yakapihwa zita rekuti Milan Bergamo Airport, ndiyo yechitatu yakabatikana kupfuura dzimwe nhandare dzenyika muItari. Iyo iri munharaunda yemasipareti yeOrio al Serio, 3.7 km kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBergamo muItari.